‘महिनामा दुई किताब पढ्ने योजना बनाएको छु’ « Tuwachung.com
२. सोताङ र पिल्मोङ ‘कुलुङकरण’मा : पुत्ला जलाउन नपरोस्
४. ९० प्रतिशत सल्लेनी वनले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सुख्खा क्षेत्र
५. नेकपा खोटाङ (ओली समूह)द्वारा भ्रमको राजनीति
६. फुपुकी छोरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा ५३ वर्षीय पुरुष घरबाटै पक्राउ
७. लालीगुराँसले धोका दिँदा उत्तिसद्वारा आत्महत्या
८. चाक्चाकुर तथ्यहीन काल्पनिक चाड
१०. गृहसचिव न्यौपानेसहित सुरक्षा प्रमुखहरू हलेसीमा
११. झापामा कुखुराको दूध तथा दही
१२. त्यहाँ बग्छन् जोरकोसी यहाँ भिज्छ रुमाल
‘महिनामा दुई किताब पढ्ने योजना बनाएको छु’
तुवाचुङ संवाददाता	२०७६ चैत्र १६, २२:०९
नेपाली काँग्रेस हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका नगर समिति उपसभापति रूपेन्द्रकुमार राई तरुण दल खोटाङ कोषाध्यक्षसमेत हुन् । उपसभापित र कोषाध्यक्षको भूमिका एकसाथ निर्वाह गर्दै गरेका राईले समाजसेवीको लोभलाग्दो परिचय बनाउँदै छन् ।
राजनीति भनेको समाजसेवा पनि हो । राजनीतिसँगै राजनीतिक समाजसेवामा लागेका नेता रूपेन्द्रकुमार राईसँग तुवाचुङ डटकमले गरेको कुराकानी :
विशेषतः नेपाली खाना दालभात, तरकारी स्वादिष्ट लाग्छ । दालभातसँगै दही, मोही भए झन् राम्रो । सकेसम्म चिल्लो खानेकुरा खान नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । खानकै लागि महिनामा दुईपटकसम्म काठमाडौंका राम्रै रेष्टुरेन्ट पुग्छु । रेष्टुरेन्ट पुगिहाल्दा चिल्लो नभएका स्न्याक्स माग्न बिर्सन्न । पकाउन मामिलामा कमजोर छु ।
‘क्याजुअल’ पोसाक बढी लगाउँछु । सर्ट–पाइन्ट, कुर्तासुरुवाल लगाउन सजिलो पनि लाग्छ । औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा दौरासुरुवाल र कोट लगाउने बानी छ । गुलाफी रङका पोसाक रोजाइमा पर्छन् । प्रायः ‘रेडिमेड’ कपडा प्रयोग गर्दै आएको छु ।
मोटाएकाले बिहान–बिहान घरमै एक घन्टाजस्तो ‘डान्स’ गर्छु ।
पठन संस्कार बसाल्न केही किताब किनेको छु । महिनामा दुईवटासम्म किताब पढ्ने योजना बनाएको छु । समाजसेवामा लागेपछि पढ्नुपर्दोरहेछ भन्ने ज्ञात भएको छ । किताब संकलन गर्न थालेको छु ।
घुमफिरमा असाध्यै रहर छ । मन मिल्ने साथी भएमात्रै घुमघाममा निस्कन्छु । ७७ मध्ये आधाभन्दा बढी जिल्ला पुगेको छु । भारत पनि घुमेको छु । घुमेकामध्ये इलाम असाध्यै मन पर्यो ।
समाजसेवामा लागेको छु । केही न केही काम गरिदिइरहुँजस्तो लाग्छ । धेर–थोर व्यस्त छु । जति नै व्यस्त भए पनि शारीरिक, मानसिक थकाइ लागे पनि मोबाइल ‘अफ’ गरेर कहिल्यै आराम गर्दिनँ । फुर्सद पाइहालेमा साथीभाइ, इष्टमित्रसँग भेटघाट गरेर समय सदुपयोग गर्छु । घरपरिवारलाई समय दिन नसके पनि मेरो बाध्यता बुझिदिएका छन् । परिवारसँग घुम्ने, चलचित्र हेर्न जाने र रेष्टुरेन्ट खान जाने गरेको छैन ।
मलाई भलिबल असाध्यै मन पर्छ । एसएलसीसम्म राम्रै खेलियो । हिजोआज पनि कहिलेकाहीं भलिबल खेल्छु । त्यसो त फुटबल र क्रिकेट हेरेर मनोरञ्जन लिने गरेको छु ।
एमआईको मोबाइल सेट प्रयोग गरेको छु । यसको २० हजार रुपैयाँ परेको थियो । राम्रै मोबाइल सेट उपहारस्वरूप पाए पनि घरमा दिएँ । मोबाइलका एप्लिकेसनमध्ये सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इमो प्रयोग गर्छु ।
बिहान टीभी हेर्ने गर्छु । टीभीमा समाचार र अन्तर्वार्ता प्राथमिकतासाथ हेर्छु । मेरो घरमा सोनीको ३२ इन्चको टीभी छ ।
चलचित्र खासै हेर्दिनँ । पछिल्लो समय हेरको चलचित्रको नाम बिर्सें । पहिले–पहिले हलसम्म पुगेर चलचित्र हेर्न जाँगर चल्थ्यो । हिजोआज जाँगर चल्दैन ।
म स्वस्थ छु । दीर्घरोगले समातेको छैन । अहिलेसम्म ‘होलबडी चेकअप’ गराएको छैन । तर, ‘होलबडी चेकअप’ गराउँदै छु । दुब्लाउँदै गएपछि घरपरिवारले ‘होलबडी चेकअप’ गराउन सुझाएका छन् । सकारात्मक सोच, खानपिन र आफूलाई खुसी राख्न सके स्वस्थ रहन सकिन्छ ।
जीवन सिकाइको शृंखला हो । समाजसेवामा लागेपछि भाषण गरिरहनुपर्छ । भाषण गर्न सिक्दै छु । देश–विदेशको प्रसंग जोडेर भाषण गर्न नआए पनि सम्बन्धित गाउँठाउँका स्थानीयले बुझ्ने भाषामा आफूले भन्न खोजेको विषय प्रस्ट्याउने प्रयास गर्छु ।
मादक पदार्थ लिने गरेको छु । ओल्ड दरबार, रेड लेबल खान रुचाउँछु । सामान्यत तीन पेगसम्म लिने गरे पनि कहिलेकाहीँ पाँचसम्म पुग्छ । म एक्लै पिउँदिन । पिउँदा सकेकसम्म फलफूल पनि खाने बानी छ । अहिलेसम्म तीनपटक मात लाग्नेगरी पिएको छु ।
मनोरञ्जनका साधनमध्ये गीत–संगीत पनि एक हो । त्यसैले सुन्छु । राजेशपायल राईको आवाज कर्णप्रिय लाग्छ । पछिल्लो समय गायिका मेलिना राईको आवाज मन नपराउने कमै होलान् ।
मानिस भएपछि जोकोहीबाट जान–अञ्जानमा गल्ती हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, पश्चाताप लाग्नेगरी गल्ती गरेको छैन । गल्ती गरे पनि आत्मालोचना गरिहाल्छु । भूल नगरे पनि कहिलेकाहीं सजाय पाएको छु ।
म बस्दै आएको (भक्तपुरको) घर चार वर्षअघि बनाएको हुँ । घर आफ्नै कमाइले बनाएको हुँ । घर बनाउन त्यतिबेला ३२ लाखजति लागेको थियो ।
मेरो राशी तुला हो । ग्रहदशा ठिकै छ । मैले नगरे पनि श्रीमतीजीले ग्रहशान्ति गराइरहन्छिन् ।
कपालमा सामान्य तेल लगाउँछु । फेसियल गर्ने बानी छैन । पफ्र्युम प्रयोग गर्न मन लाग्दैन । हिउँदमा स्टीम बस्ने गरेको छु ।
मेरो प्रेमबिहे हो । हामीले एकलाई अर्कोले बुझेका थियौं । त्यही भएर प्रेमप्रस्ताव स्वीकृत नहुने कुरै थिएन ।
हलेसी–तुवाचुङ नगरपालिकामा उदाहरणीय र सराहनीय काम गर्ने प्रयास गर्दै छु । त्योभन्दा ठूलो सपना देखेको छैन ।
मृत्यु अनिवार्य सर्त हो । मृत्युदेखि डर लाग्नु स्वाभाविकै हो । काठमाडौंको चाबहिल चोकमा दुर्घटनामा परेको थिएँ । दुर्घटनामा हात भाँचिएको थियो । त्यो क्षण मृत्युको नजिक पुगेको अनुभूति गरेको थिएँ । मृत्यु त्यति छिटो नहोस् भन्ने लाग्छ । मृत्यु सहज होस् । अरूलाई दुःख दिन नपरोस् ।
साहित्य पनि कलात्मक राजनीति
साहित्यलाई भोजनालयसँग तुलना गरिएको छ । नुनथला, खोटाङका नवीन संघर्ष पनि सहमत छन् । तर,
सकेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा नगएकै जाती
शिक्षण पेसामा १७ महिना बिताएका पृथ्वी राउतले त्यसपछि केही समय अतिरिक्त हुलाकमा काम गरे ।
‘जातजातिबारे पुरातत्व र वंशाणुविज्ञान अध्ययन गर्दै छु’
भोगीराज चाम्लिङ युवापुस्ताका अध्ययनशील व्यक्तिमा गनिन्छन् । चाम्लिङ पछिल्लो समय इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व अध्ययनमा
पूर्वमाननीय बानियाँ भन्छन्– महारानीलाई मदन पुरस्कार अनपेक्षित उपलब्धि
इतिहासका जानकार तथा लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँले तत्कालीन पर्वत राज्यको विषयवस्तुलाई आधार बनाएर लेखेको ‘महारानी’ उपन्यासले